Kooxdee ayuu qaban doonaa Jose Mourinho haddii uu Manchester United ka tago? - Radio Risaala: Somali News Online
Home Ciyaaraha Kooxdee ayuu qaban doonaa Jose Mourinho haddii uu Manchester United ka tago?
Kooxdee ayuu qaban doonaa Jose Mourinho haddii uu Manchester United ka tago?
Macallinka hooggaamiya kooxda Manchester United ee Jose Mourinho ayaa albaabada u furay ku laabashada kooxda Real Madrid.
Macallin Mourinho ayaa hadda United kula jira qandaraas ku eg illaa 2020, balse mustaqbalkiisa shaqo waa mid lulalanaya.
Los Blancos ayaa xagaagii waxa ay tababare u magacawday Julen Lopetegui, si uu beddel ugu noqdo Zinedine Zidane oo iska casilay shaqada kooxda Real Madrid ka dib markii uu saddex jeer kula guuleystay Champions League-ga.
Balse Lopetegui waxa uu ku guuldarreystay in kooxda uu kusii hayo qaab ciyaareedkeedii wacnaa, isagoo ugu dambeyn shaqada laga eryay.
Waxaa ka dib kooxda Los Blancos maamulkeeda loo gacan geliyay Santiago Solari, kaasoo builaw qurux badan ka dib hadda shaki badan laga qabo tayadiisa.
Ka hor inta aanan la magacaabin Solari, macallimiintii lala xiriiriyay Real Madrid waxaa ka mid ah Mourinho.
Macallinka reer Portugal ayaa shaki badan la gelinayay mustaqbalkiisa Old Trafford, waxaana taasi ay dhalisay in saxaafadda ay qorto macquul ahaanshaha uu ugu laaban karo caasimadda Spain.
Madaxweynaha kooxda reer Spain ee Florentino Perez ayaa xiriir wanaagsan la leh Mourinho, waxaana macallinkan 55-jirka ah uu soo dhoweeyay inuu dib u maamulo kooxda 13-ka jeer hanatay tartanka horyaallada Europe.
Mourinho ayaa Real Madrid kasoo shaqeeyay intii u dhexeysay 2010 illaa 2013, waxaana uu kula guuleystay Copa del Rey, La Liga iyo Spanish Super Cup.
Previous articleYemen’s warring sides gather in Sweden for peace talks
Next articleHal arrin oo ay Juventus ku xirtay Ronaldo ka hor inta uusan kusoo biirrin oo la ogaaday!